Qaxooti Ethiopia oo soo galaya Kenya - BBC Somali
Qaxooti Ethiopia oo soo galaya Kenya
30 Luulyo 2012
Lahaanshaha sawirka s
Image caption Kumanaan ruux ayaa ka soo qaxayo Ethiopia iyadoo dagaal qabiil oo ka socda koonfurta dalkaasi
Dagaallo qabiil oo ka socda Koonfurta Ethiopia ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen 18 ruux oo 12 kalena ay ku dhaawacmeen.
In kabadan 20,000 oo ruux ayaa xadka Kenya soo galey iyagoo ka baxsanaaya dagaalka.
Saraakiil ka tirsan hay’ada Laanqeyrta Cas ee Kenya ayaa BBC u sheegey in dadka ay weli ku soo qul-qulayaan xadka in kasta oo ciidamada dowladda Ethiopia la sheegayo inay kala dhex-galeeen qabaa’ilka is dagaalamayey.
Inta badan dadkani qaxootiga ah ayaa lagu soo warramayaa inay habeenkii seexdaan banaanka in kasta oo ay hay’addad Laanqeyrta Cas ee Kenya ay sheegeysa inay ku dadaaleysa sidii ay dadkani ku heli lahaayeen cunno, biyo iyo hoy.
Madaxa waaxda warbaahinta ee hay’adda Red Cross ee Kenya Nelly Muluka ayaa BBC u sheegtey in hay’adda ay halkaasi u dirtey koox gurmad deg deg ah oo la tacaasho howlaha bani’aadanimo ee magaalada Moyale.
Qaxootiga qaar ayaa degey skoolada iyo masaajida, taaasi oo raad ku yeelatey waxbarashada magaalada Moyale.